“Waxaa jira hal dagaal oo aan rabno inaan ku guuleysano dhamaanteen” – Casemiro – Gool FM
(Madrid) 04 Abril 2020. Xiddiga qadka dhexe reer Brazil ee Casemiro in qof walba oo ka tirsan kooxda Real Madrid uu haatan ka fikirayo kaliya inuu dhamaado faafaha Coronavirus, kaasoo Isbuucyadii ugu dambeeyay ay sii korodhay waxyeeladiisa.
Dhamaan ciyaartooyda Real Madrid iyo shaqaalaha kooxda ayaa la karantiilay toddobaadyo ka hor inta uusan faafaha Coronavirus si xoogan ugu faafin gudaha Spain, waxaana ilaa iyo amar dambe la joojiyay tartanka horyaalka La Liga.
Haddaba Xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Casemiro ayaa wareysi uu ku bixiyay “Save the Children” wuxuu ku sheegay:
“La Liga iyo Champions League waxay ahaayeen labada bar-tilmaameed ee aan rajeyneynay inaan ku guuleysano sanadkan kooxda dhexdeeda, laakiin taasi hadda kuma fikireyno”.
“Waxaan ku noolnahay waqtiyo adag oo dhib badan, waxaanna hadda dooneynaa inaan ku guuleysano dagaalka aan kula jirno faafaha Coronavirus.”
“Waa inaan doorkeena ka ciyaarnaa oo aan joogno guriga oo aan caawino bulshada, sidoo kale anagoo raaceena xeerarka”. ayuu raaciyay xiddiga qadka dhexe reer Brazil ee Casemiro .